राजिनामा दिएको केहि घण्टा नहुँदै गोकुल बास्कोटाको कार्यकक्षमा घट्यो यस्तो घटना ! – " सुलभ खबर "
राजिनामा दिएको केहि घण्टा नहुँदै गोकुल बास्कोटाको कार्यकक्षमा घट्यो यस्तो घटना !
काठमाडौँ- कमिसन अडियो प्रकरणमा राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको कार्यकक्षबाट बिहीबार साँझ विभिन्न कागजातहरु धमाधम पोको पारेर उनकै टिमका सदस्यहरुले लगिरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण राजीनामा दिएका बास्कोटाको उनी निकट व्यक्तिहरुले सबै कागजातहरु पोको पारेर लैजान थालेका हुन्।
आम जनसमुदाय, विभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलहरुबाट घटनाको छानबिन गर्न माग गरिरहेका बेला उनको कार्यकक्षबाट सबै कागजात लगिएको हो। अहिले उनको कार्यकक्षमा कसैलाई पस्न दिइएको छैन। पत्रकारहरुलाई फेस गर्न नसकेपछि उनले बिहीबार ट्विटबाटै राजीनामा दिएका हुन्।त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको निजी सचिवालयमा आज छापा मा’रेको छ ।
सचिवालयमा छापा मारेर बास्कोटाका कागजपत्र सिलबन्दी गरिएका छ ।आज साँझ मन्त्रालय पुगेका सादा पोशाकका प्रहरीले निजी सचिवालयको कागजात जफत गरी मन्त्रीले प्रयोग गर्ने दराजमा रहेका कागजात सिलबन्दी गरेका हुन् । बुधबार बेलुका मात्रै बार्गेनिङ्ग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बिहीबार बास्कोटाले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवा तथा वरिष्ठ डाक्टर सुन्दरमणी दीक्षितले कमिसन खेलमा मुछिएका निवर्तमान मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजिनामा दिएर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । उनले कारवाहीको माग गरेका छन् । संवाद डबलीले विहीबार गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ल”ड्नु पहिले मानिस निकै घमण्डी हुने बताउँदै बास्कोटा पनि त्यति गति भएको बताए ।
मंचबाट कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने बास्कोटा आफै नरहेको भन्दै डा दीक्षितले भने, “गोकुल बास्कोटाले सँधै मंचबाट मनलाग्दी बोलेर कसैलाई पनि बाँकी राख्नु हुन्नथ्यो ।बास्कोटाजीले सबै मानिसहरु खराब, आफूमात्रै असल भनेर जुन देखाउनु हुन्थ्यो तर आज अडियो सुन्दा सबैभन्दा खराब त उहाँनै रैछ ।” उनले यो भन्दा पहिलो ५० करोडसम्मको कमिसनको कुरा सार्वजनिक भएको बताउँदै ७४ करोडमा पुगेर बास्कोटाले रेकर्ड तोडेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डा. दीक्षितले राजिनामा दिन लगाएर छुट दिन नहुने भन्दै कडा कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली अग्नी परीक्षामा रहेको समेत बताए ।
“प्रधानमन्त्रीजीले ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि छोड्दिन’ भन्दै आउँनुभएको छ, अब थाहा हुन्छ, बास्कोटालाई छुट दिनुहुन्छकी कारवाही गर्नुहुन्छ ? ओलीजी अग्नी परीक्षामा हुनुहुन्छ ।” उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटालाई कारवाही नगरे आफ्नो नजरबाट गिर्ने समेत बताए ।बास्कोटा ओलीजीको धेरै नजिकका व्यक्ति हुन्, राजिनामा दिएपछि छुट दिन्छन् वा एक्सन लिन्छन् हेर्न बाँकी छन् । यदि छुट दिएभने मेरो नजरबाट गिर्नुहुन्छ । ओली अग्नी परीक्षामा हुनुहुन्छ” डा. दीक्षितले भने । उनले प्रधानमन्त्री फेल वा पास हुन्छन् हेर्न बाँकी रहेको बताए ।